खाना अपच हुने समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ ? यस्त छन् समाधान गर्ने घरेलु उपायहरु – Samabeshi Khabar
Monday, May 10Nepal News Portal
खाना अपच हुने समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ ? यस्त छन् समाधान गर्ने घरेलु उपायहरु
२५ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १२:१९ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, (ससं) । धेरै मानिसहरुलाई खाएको खाना पचाउन निकै नै गाह्रो हुन्छ । खाना अपच भयो भने स्वास्थ्य निकै समस्या आउछ । यसको बेलैमा उपचार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइँ गरेमा गम्भीर समस्या आइलाग्न सक्छ । यस कारण कुनै पनि समस्या देखिएमा बेलैमा समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । खान अपच भएमा अदुवाको एउटा टुक्रामा केही थोपा कागतीको रस र अलिकति बिरे नुन मिसाएर खाने गर्नुस् ।
पुदिना, धनियाँ, हरियो खुर्सानी, अदुवा, कागतीको रस आदि मिसाएर बनाएको ताजा अचार खानासँग खाने गर्नाले पाचनशक्ति बलियो हुन्छ । मनतातो पानीमा मह र कागतीको रस मिसाई खाली पेटमा खाने गर्नाले अपचको समस्या क्रमशः कम हुँदै जान्छ । खाना राम्रोसँग पच्दैन भने खाँदाखेरि बेस्कन चपाएर खाँदा पाचन राम्रो हुन्छ ।
खाना खाइसक्ने बितिकै नगर्नुस् यी कार्यहरु,क्यान्सर सम्म हुन् सक्छ !
पाचन बलियो नहुनुको मतलब तपाईंको कलेजो त्यति स्वस्थ छैन । त्यसैले मजिराजन्य पदार्थ छुँदै नछुनुस् । पाचन प्रणालीका लागि यो विषतुल्य हुन्छ । गाजर, चुकन्दर, सागसब्जी र फलफूलजस्ता कलेजोलाई स्वस्थ बनाउने खाना हरेक दिने खाने बानी बसाल्नुपर्छ ।पाचनशक्ति कमजो हुनेहरूको शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ । यसले पाचनक्रियालाई समेत असर गर्ने भएकाले पानी प्रशस्त पिउने गर्नुपर्छ ।
बढी तनाव लिनुभयो भने पनि पेट ढुस्स फुल्ने, खाएको नपच्ने आदि हुन्छ । तनावले मन र दिमागलाई मात्र होइन, पाचनलगायत शरीरका समग्र प्रणालीलाई नै असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले तनाव कम गर्न योग, प्राणायाम, ध्यान आदि गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । हरेक दिन घ्यूकुमारीको जुस अथवा अमला खाने गर्नाले पाचनशक्ति बलियो हुन्छ ।
Total Page Visits: 284 - Today Page Visits: 3
Posted in समाज, सम्पादकीय
खड्काको सांसद पद खारेज
१५ बैशाख २०७८, बुधबार १५:१३ by Samabeshi Khabar
केन्द्रीय सदस्य र कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित
१५ बैशाख २०७८, बुधबार १३:०० by Samabeshi Khabar
आज कति छ सुनको मूल्य ? हेर्नुहोस्
१५ बैशाख २०७८, बुधबार १२:४६ by Samabeshi Khabar
आज नेप्से परिसूचक ३.६९ प्रतिशतले वृद्धि
१४ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:३६ by Samabeshi Khabar
उपत्यकामा २२ वैशाखदेखि फेरि निषेधाज्ञा लम्बिने
१४ बैशाख २०७८, मंगलवार १४:५३ by Samabeshi Khabar